Phezulu kweStockbridge High ST Fisherman's Retreat
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguAdelle
Ifakwe encotsheni yesitalato esiphakamileyo saseStockbridge, embindini weNtlambo yoVavanyo, iFisherman's Retreat ikumgama omnye ukuya kwemihlanu ukuhamba kuzo zonke iivenkile, ii-pubs, amagumbi eti kunye neeresityu ekufuneka ibonelelwe yile dolophu ithandekayo yaseHampshire.
Ilungele ukubaleka impelaveki, ngeentsuku zokuloba kuVavanyo loMlambo, ukudubula ngeempelaveki okanye ukuhamba nje, ukukhwela ibhayisekile okanye ukonwabela amaphandle aqengqelekayo. Ukuzimela kunye nokufanelekileyo kwisibini (nangona i-sofa-bed ithetha ukuba ezine ziyakwazi ukuhlala).
Igumbi lokulala eliphindwe kabini elinegumbi lokuhlambela eline-ensuite, indawo yokugcina eninzi kunye nendawo yokusebenza.
Igumbi lokuhlala elikhululekile (elinebhedi yesofa).
Ikhitshi elixhotyiswe kakuhle.
Indawo yokupaka ngaphandle kwesitalato.
IStockbridge ilele kumbindi weNtlambo yoVavanyo. Le dolophu idumileyo kunye nembali yayo ende, kuquka naleyo yeHoughton Fly-Fishing Club esekwe kwiGrosvenor Hotel ukususela ngo-1882, iye yaphefumlela ababhali kwiinkulungwane. Umkhondo wemibongo elishumi esetwe kumacwecwe elitye kunye nentsimbi ukukhokelela kwisitrato esiphakamileyo esibanzi nesibukekayo esinoluhlu lweevenkile ezinomtsalane, iindawo zentselo, iivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela, izidlo ezidliwayo kunye neebhula zesintu, iigrocer, iintlanzi kunye neevenkile zempahla.
Yaziwa kwihlabathi liphela njengekhaya leyona tshokhwe ilungileyo yokuloba iimpukane, iStockbridge ikwahlala embindini weendlela ezininzi zokuhamba nokuhamba ngebhayisekile (ezinje ngeNdlela yoVavanyo kunye neNdlela yaseClarendon), kwaye ikufutshane neDanebury Hillfort, Houghton Lodge Gardens. , Longstock Watergardens, Mottisfont Abbey, Danebury Vineyards and the Army Flying Museum at Middle Wallop.
Umbuki zindwendwe ngu- Adelle
Nangona uya kukwazi ukuzimela ngokupheleleyo ngexesha lokuhlala kwakho, abanini baya kufumaneka ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo.